Ikhaya > Imikhiqizo > U-Alumina Ceramic > I-Alumina ceramic tube / ipayipi / induku / roller
Ama-Alumina amashubhu njengomkhiqizo ojwayelekile we-ceramic. I-Alumina ingathatha amathretha afinyelela ku-1650 ° C, ukuba nokuqina okuphezulu kakhulu kokushisa, ukumelana kwamakhemikhali, kanye nokulimala okuphezulu nokumelana nokulimala okuphezulu.
Sinikeza uhla oluthuthukisiwe lwamashubhu we-99% alumina.
Kuvuliwe futhi kuvaliwe ukuphela
Izinhlobo ezahlukahlukene zosayizi, ukusika ngobude benkambiso
Izinto zesitoko ezithunyelwe kungakapheli amahora angama-24
Ukuhanjiswa kosuku olufanayo kuyatholakala ngemali ebonakalayo
Amashubhu wobude obukhulu athunyelwe kungakapheli amahora angama-48
Ukusebenza kwe-ceramic yezimboni
Izici ezenziwe ngomshini
Umugqa wokunwetshwa komugqa
(20-500 c) 10-6 / c
* 10-3J / (kg * k)
I-Dielectric ihlala njalo (1mhz)
I-Dielectric Loss Angle
* 106v / m
Kusetshenziswe kabanzi emalambu nasezitengeni, izinto ze-elekthronikhi, i-blast nozzle, izingxenye ze-auto, izingxenye ezivimbela ukugqokwa kwezinto zokufaka okufaka, njll
Singenza i-OEM ne-OBM ngokuya ngomdwebo wakho nokudinga
Iqembu: Sineqembu lethu ukucwaninga, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa.
Ukupakisha: Ukupakishwa okuphephile ezindaweni ezithekezele zokhuni
Ngabe wamukela ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso kusekelwe ukucaciswa kwethu?
* Yebo, sinikeza insizakalo ye-OEM ne-ODM. Vele usithumele umdwebo wakho uma unayo. Uma ungenawo umdwebo, vele usitshele umbono wakho, sizokwenzela umdwebo wakho.
* Izinsuku eziyi-7 zokusebenza zemikhiqizo ejwayelekile izinsuku ezingama-30 zomkhiqizo owenziwe ngezifiso.